ယရှေုသညျ - လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အာမခံ | Apg29
ယရှေုသညျ - လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အာမခံ
ယရှေုသညျတစျခုလုံးကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်အာမခံရပ်နေ၏။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုရှောလမုန်မင်းကြီးပရောဖက်ပြုဗျာဒိတ်သုကဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှစ်ပေါင်းရာချီမတိုင်မီ, ယရှေုအဝတ်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြင့်နိုင်ဘူး။
က Man အပြစ်တရား၏အ၎င်းတို့၏ကြွေးမြီပေးဆပ်ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ သို့သော်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံဖြစ်လာပြီးတွေအများကြီးလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကြွေးမြီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးပေးဆောင်။ ဒါဟာရွှေငွေတွေနဲ့ paid မရနိုင်တော့ပေမယ့်ယရှေုသညျသူသညျမိမိအသွေးတော်မြတ်နှင့်အတူကပေးဆောင်သည့်အခါစျေးနှုန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
35: ကျနော်တို့ Matt.27 ထံမှကျမ်းကိုးကား
"သူတို့ကသူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပြီးမှ, သူတို့သည်စာရေးတံ ချ. အားဖြင့်မိမိအဝတ်ကိုဖွင့်ပိုင်းခွဲ"
အခြားဘာသာပြန်ချက်ထဲမှာဖတ်: "စစ်သားတွေ, မိမိအဝတ်ကိုဝေအန်စာတုံးကစား" နှင့်သေးသောအခြားအဆိုပါဖြစ်ရပ်ကိုလည်း Mark.15 တှငျဖျောပွထားခြင်းဖြစ်သည် "ထိုသူတို့အဘို့မူးယစ်ဆေးကောက်ရိုး။ ": 24 နဲ့လုကာ။ 23:34 ။
သို့သော်အားလုံးကမျြးစာကိုစာဖတ်သူများကယေရှုရဲ့အဝတ်အစားတွေ၏ဖြစ်ရပ်ကိုလည်းဓမ်မဟောငျးကမျြးအတွက်ခန့်မှန်းကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏မည်မဟုတ်ပါ။ ပရောဖကျသု၌ဤအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ခဲ့တဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီး။ 20:16:
"ဟုသူကအခြားအာမခံသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်, သူ့ကိုအဝတ်ကို ယူ. , သူသည်တကျွန်းတနိုင်ငံသားဘို့အလိုငှါရှိပါတယ်သည့်အခါအပေါင်ထားသောဥစ္စာ။ "
ထိုကဲ့သို့သောသင်နှင့်ငါကဲ့သို့အပြစ်တရား၏အပြစ်ကိုသယ်ဆောင်သူကို - အား "ဂြိုလ်သား" နဲ့မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေအယူမှား, ဂျူးတွေ, အကယ်စင်စစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့, ပြိုလဲလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏မြေတပြင်လုံးကိုဆိုလိုသည်။ သု၌တည်၏။ 27:13: says:
"သောအခါသူသည်အမျိုးပျက်သောမိန်းမရဲ့မျက်နှာကို ထောက်. သူအခြားအာမခံသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်, သူ့ကို၏အဝတ်ကို ယူ. , အပေါင်ထားသောဥစ္စာ။ "
ဓမ်မဟောငျးကမျြးကြိမ်၌၎င်း, ယရှေု၏အချိန်မှာကြွေးမြီ-loaded ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများအတွက်အာမခံရပ်နေသောလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးအလွန်လေးလံသောတာဝန်အိပ်ပျော်။ အဆိုပါအာမခံပထမဦးဆုံးမြီစားမယ့်ကြွေးမြီပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မြီစားမဆပ်နိုင်လျှင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အာမခံမယ့်တာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာပင်ပေါင်သည်မိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းငှါခွင့်ပြုခွင့်ရခဲ့သည်။
ကျနော်တို့တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးအာမခံအဖြစ်ဖြစ်ပျက်၏စံနမူနာအဖြစ်အခြားကျမ်းစာ၌ပါကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သု။ 22: 26-27
"ဟုအဆိုပါချေးငွေအာမခံရပ်သောသူတို့၏အမျိုးအလက်တို့ကိုဒဏ်ခတ်သောသူတို့က, မတဦးတည်းရှိကြလော့။ သငျသညျသငျနှငျ့အတူဆပ်ဖို့ဘာမျှမရှိသည်ဆိုပါက, သင်သည်သင်တို့နေရာအိပ်ရာပယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်း, မကြိုက်သည်မဟုတ်လော "
ဒါဟာစစ်သူရဲတို့သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေအဝတ်အစားတွေကိုယူခဲ့ရတယ်သောဣသရေလအမျိုး၌အထုံးစံဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသာကယေရှုရဲ့အဝတ်အစားတွေ, ဒါပေမယ့်လည်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေဓားပြအဝတ်ကိုယူ။ ယေရှုရဲ့အင်ျကြီတဦးတည်းအပိုင်းအစထဲမှာယက်နှင့်မျှမတို့ချုပ်ရိုးရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်စစ်သားကဆွဲဖြတ်ပေမယ့်အဲဒါကို (ဖြစ်မှု။ 19:25) ပိုင်နိုင်သူကိုကြည့်ဖို့အဘို့စာရေးတံချကြဘူးခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါစစ်သားများကြောင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်ဆွဲထားခဲ့သည်ပိုပြီးဝတ်ဆင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ဘူးသိတယ်။ သို့သျောလညျးသူတို့သညျယရှေုအဝတ်မျှဝေခြင်းဖြင့်သင်သိရနှင့်ကုတ်အင်္ကျီကွာပေးသည်အသေးစိတ်ဆာတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ 22:19 ။
ပထမဦးဆုံးကိုအာဒံအပြစ်တရားသို့ကျဆင်းခြင်းနှင့်ပရဒိသုကနေနှင်ထုတ်ခံရခံခဲ့ရသည်အဖြစ်သူသည်မိမိအချည်းစည်းရှိခြင်းဖုံးကွယ်နိုင်အောင်, ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအဝတ်ကိုပေး၏။ နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒံ (ယရှေု) ကြှနျုပျတို့၏အပွစျမြားဘို့အသေခံခြင်းနှင့်ကြှနျုပျတို့အတှကျကျိန်စာဖြစ်လာခဲ့သည်သောအခါသူသုတ်သင်ခံခဲ့ရသည်။
V 09, måndag 1 mars 2021 kl 21:24